Nhau - Ndeipi iri nani, chena porcelain kana nyowani pfupa porcelain, rega nditaure?
Porcelain tableware ndiyo yakanyanya kuwanda tafura mune yemazuva ese tafura. Zvinoenderana nemidziyo, porcelain tafura yakakamurwa kuita chena porcelain tafura, bone porcelain tafura, uye shell porcelain tafura. Pakati pavo, bone china tafura inonyanyo kufarirwa.
Bone china pakutanga raidaidzwa kunzi bone china, asi vanhu vakafunga kuti izwi rekuti "ash" rakanga risiri "elegant", saka vakachinja zita raro kuita bone china, kana bone china kwenguva pfupi. Bhonzo china rine zvinopfuura makumi mana kubva muzana zvemadota emakwenzi uye inoshamwaridza nharaunda mutengi chigadzirwa. Inofananidzwa neyakajairika keramiki, yakasarudzika yekupfura maitiro uye izvo zvemapfupa kabhoni zvinoita kuti bone china ioneke chena, isina kusimba, yakajeka uye isina kureruka. Paunenge uchitenga bone china tafura, unogona kuisiyanisa nenzira nhatu dzinotevera.
Imwe, tariro. Ruvara rwefupa china: bone china pachayo yakasvibirira chena nekuda kweiyo pfupa hupfu, inova yero yero mumashoko anozivikanwa. Ichi chimiro hachigone kuteedzerwa nechero imwe porcelain.
Mhando dzakakosha kwazvo dzevhu pamusika izvozvi, dzakadai seye chena porcelain, goko porcelain, uye pearl porcelain ese akachena chena. Tinogona kutsanangura yakachena chena sebhuruu-chena; kechipiri, iwo ese mapfupa china, asi kubva padanho reyero inogona kutaurira pfupa remukati pfupa rechina chairo. Nezve bone china, zvirimo zvehupfu hwehupfu hwakakosha hunyanzvi indekisi kusiyanisa iro giredhi repfupa china. Iyo yakawedzera pfupa hupfu, yakanyanya kukwirisa-giredhi bone china, uye yakanyanya iyo mavara epfupa china inowanzo kuve yakachena mukaka. Pane kupokana, kana iyo pfupa yekudya zvemukati iri yakaderera, iyo yellowness yefupa china pachayo iri pachena kwazvo.
Chechipiri, kunhuwa. Ruzha rwefupa china: Nekuda kwekugadzirwa kwayo, kune yakakosha yekunze chimiro chefupa china, irwo ruzha rwunoitwa kana bone china ichirovera-isa maviri epamusoro-giredhi bone china ndiro pamaoko ako akapfava kuti ubonderane, teerera, Bhonzo china ivhu rakaumbirwa paipisa tembiricha. Iko kuomarara kwakanyanya kwazvo. Iyi mhando yekurovera haizokuvadzwa. Unogona kudhumhana neyakaomarara zvishoma. Iyo yepamusoro-giredhi bone china ichaburitsa yakatsetseka kunge bhero mushure mekurovera. Ruzha rwe "clang" rwakadzvanywa, uye nguva yeerekero iri refu, nepo mamwe mapurazi anoita ruzha rwe "ding" ruzha, uye hapana kana ruzha.